Indawo yokuhlala yaseValiben!
UMaya unezimvo eziyi-25 zezinye iindawo.
Le ndawo yokuhlala yinxalenye yenyathelo lika-Hum Sab Ek hain (Sinye) le-SEWA. I-SEWA iququzelela abantu basetyhini abahluphekayo, abaziqeshileyo abangabasebenzi kuqoqosho olungekho sikweni ukuze bajolise kwiinjongo ezimbini eziphambili zokuqeshwa ngokupheleleyo kunye nokuzimela.
Indawo yokuhlala epholileyo engqongwe ngamasimi kunye neefama, ezinze kwiLali yaseVadu kuMantla eGujarat. Kude nesiphithiphithi kunye nokuphithizela kwesixeko, unokufumana uxolo kunye nomoya ozolileyo welali yaseGujarat. Ikhaya lethu limalunga neekhilomitha ezingama-30 ukusuka kwikomkhulu lesithili saseMehsana.
Ifakwe kwenye yeelali zaseIndiya ezinomtsalane. Indlu inamagumbi ama-2 abanzi kwaye angena umoya. Amagumbi akumgangatho wokuqala kunye nokufikelela kwi-balcony. Ineebhedi, itafile kunye nesitulo oza kusisebenzisa. Kukho igumbi lokuhlambela elingaphandle kwegumbi.
Kukho iTV endlwini yokuzonwabisa kwakho. Ikhitshi elisendlwini inesikhenkcezisi esincinci apho unokugcina khona ukutya kwakho. Izixhobo ezisisiseko kunye nezibonelelo zikhona ukuze zikuncede wenze iti/ ikofu.
Zingenise kwi cuisine yesiGujarati onikwe yona ngesidlo sakusasa.
Sihlala kwindlu enye, sikuvuyela ukunceda!
Ungahamba uhambo lwendalo ujikeleze ilali, undwendwele iziko lokhenketho le-organic eco eyintsebenziswano yabalimi bemithi. Ungandwendwela isitudiyo sikanomathotholo sasekuhlaleni esekwe ngabafazi be-SEWA apho bathatha inxaxheba ekuhleleni nasekurekhodeni iinkqubo zikanomathotholo zasekuhlaleni. Ngaphandle kokuthatha uhambo lwendalo kwindawo ezolileyo, ungakhapha nabasetyhini base-SEWA xa besiya emsebenzini. Iziko lokhenketho lwe-eco elimiselwe ngamalungu e-SEWA kwindawo eyinkunkuma karhulumente nalo likufutshane. Ungajonga ifama, undwendwele itempile ekufutshane, uthenge imifuno ephilayo yasekuhlaleni, ube nesidlo sesintu sendawo kwaye uthethe nabasetyhini malunga nomzabalazo kunye nendlela abayiseka ngayo le ntsebenziswano yabalimi bemithi enobubele. Zininzi izinto ezinomtsalane zelifa elikufutshane nelali onokuthi uyindwendwele. Itempile yelanga edumileyo eModhera imi kumgama oziikhilomitha ezingama-45 ukusuka kwilali yethu Ngaphandle kwendawo esembindini, ungandwendwela i-stepwell edumileyo e-Adalaj emalunga ne-60km ukusuka elalini. Ingumzekelo woyilo lwezakhiwo zaseIndiya ezinomsebenzi woyilo woyilo wamaSilamsi. Unokundwendwela itempile edumileyo yaseAkshardham. Apha umntu unokubona ilitye lesikhumbuzo eliqingqwe ngokuntsonkothileyo elenziwe ngelitye lentlabathi elipinki.
Sihlala kwindlu enye ke, ukuba ufuna nantoni na siyakukhwaza.
Sinokuhlala kwaye sithethe kwaye sabelane ngamabali. Singathanda ukwazi ngakumbi ngawe kwaye singathanda ukwabelana ngamabali obomi bethu kwiindawo eziyintlango. Singakucebisa ngeendawo ezifanele ukutyelelwa ebumelwaneni kwaye sikudibanise noluntu lwasekuhlaleni kunye nezithethe zabo.
Sinokuhlala kwaye sithethe kwaye sabelane ngamabali. Singathanda ukwazi ngakumbi ngawe kwaye singathanda uk…